Marka iibinta iPhone ama iska qof la siiyo, wax 1aad in aad rabto in aad lahayd in la sameeyo waa in la hubiyo in aanay awoodin in ay helaan wax kasta oo aad macluumaad ku saabsan qalab aad, gaar ahaan dhan in macluumaadka gaarka ah ee idinkaa iska leh. Apple ayaa dhab ahaan laga qaaday xaaladan in si xisaabta oo halkan la macruufka ay, shirkadda ma bixiyaan siyaabo fudud ee la tirtiro xogta aad ku iPhone.
Waa in aanu si aad ugala hadasho habka ugu badan ee la tirtiro xogta ka iPhone si kastaba ha ahaatee ka hor inta aadan bilaabin la, aan aad ugu boorinayna in aad la abuuro gurmad ah ee aad iPhone isticmaalaya muujinta gurmad on iCloud ama Lugood si aad awood u leedahay dib u soo ceshano xog kasta oo in aad rabto in aad dib on.
Qeybta 1: habka Common in meesha laga saaro dhammaan xogta ka iPhone
Qeybta 2: Sida loo saaro dhammaan xogta ka iPhone joogto ah
Talaabada 1: Aad screen Home dibna Settings> General> celi kadibna riix on ikhtiyaarka ah 'masixi All Content iyo Settings ".
Talaabada 2: waa in hadda la keenay in Waxaad si loo xaqiijiyo doorashada Hooygiinuna, si wax miiran on ikhtiyaarka ah 'masixi iPhone'. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad samayn in, waxaad arki doontaa in ilaa pop socda idin ​​xusuusin doonaa in aanad awood u yeelan doonaan in ay tirtireyso ficilkan, si fudud wax miiran ah oo ku saabsan ikhtiyaarka ah 'masixi iPhone' hal mar in ka badan si uu u dhameystiro nidaamka.
Waa sidaas. Sidaas waxaad awoodi doontaa in aad tirtirto content oo dhan ka iPhone dhowr laftiisa daqiiqo gudahood. Si kastaba ha ahaatee, waa habka ugu nabad badan ee la tirtiro xogta aad content gaarka ah iyo ka iPhone? Waxaan baryayaa inaad ku kala duwan yihiin.
Waa maxay sababta? Maxaa yeelay, waxaa jira weli dad badan oo siyaabo ka mid dib u soo ceshano karo oo dhan of this tirtirayaa xogta ka iPhone sidii loo marnaba burburiyeen gebi ahaanba la isticmaalayo habka ku xusan. Sababta ka dambeysa arrintan waa xaqiiqda ah in mar kasta oo aad isticmaasho habka kor ku xusan oo dhan in macruufka samaynayso waa in la saaro xiriir la heli karo si xogta aad ku iPhone oo diyaar u ah in uu kaydiyo xogta cusub ee ay meel weerarka noqon. Waxa ay ka dhigantahay in xogta oo dhan ayaa weli ku jiifa xusuustaada iPhone meel, oo sugaya in ka badan oo qoraal ah xogta cusub ee mustaqbalka.
Hadda, in aanu ka dhawaajin xiiso leh oo dhan, sax?
Waa maxay SafeEraser Wondershare ? Tani waa su'aal quruxsan fudud si dhab ah uga jawaabi. SafeEraser waa mid ka mid ah tirtire xogta iPhone nooc ka Wondershare in si gaar ah loogu talagalay in ay u tirtiri soo baxay oo dhan macluumaadkaaga shakhsiyeed ka qalab macruufka ah si joogto ah.
Waxa uu isticmaalaa US Military ku salaysan ka badan oo qoraal ah technology si loo hubiyo in macluumaadka ku saabsan iPhone waa Mareeykan ah qof kasta. Halkan waxa aad ku arki deg deg ah ee qaababka ay.
1 Click Nadiifinta - Waxaad isticmaali kartaa SafeEraser si aad u nadiifiso junk la kaliya 1 click oo lacag la'aan doonaa meel weyn idiin ku saabsan qalabka macruufka.
Photo hawadda - Isticmaal SafeEraser ku cadaadisaa sawirada qabtay iyadoo la isticmaalayo qalab macruufka in kuwa kale ee waa weyn ee size iyo sidaas oo lacag la'aan ah ilaa iyo xusuusta ka badan.
Masixi Data Private - SafeEraser sidoo kale kuu ogolaanaya in aad tirtirto oo dhan xogta gaarka loo leeyahay in lagu kaydiyaa qalabka aad.
Masixi tirtiray Files - All files in la tirtiray, laakiin weli waxay yihiin; SafeEraser ka heli kartaa kuwa iyaga iyo tirtirto sida fiican ee aad u.
Masixi All Data - Isticmaal SafeEraser in ay tirtirto dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka oo aan haysan si ay u soo celinta qalabka si goobaha warshad ama soo afjarno waayo, xaalkaas in.
Waa sababta ka mid ah sifooyinka SafeEraser waa doorasho jecel badan kuwaas oo doonaya in ay u hubiyaan in ay xogta waa aamin iyo ma u nugul nooc kasta oo ka mid ah si xun u isticmaalka qof. Ha noo eegno sida aad u isticmaali karto si joogto ah oo dhan ka saaraan xogta ka iPhone hadda.
Talaabada 1: Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare SafeEraser on your computer, waxaa lagu daahfuri. Laga soo bilaabo interface ugu weyn, dooro ikhtiyaarka ah ee 'masixi All Data'.
Talaabada 2: Shaashadda xigta waxay doonayaan in aad si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad tirtirto oo dhan xogta, si nooca in 'tirtirto' ka dibna riix badhanka 'masixi Hadda'.
Talaabada 3: Hubi in aad iPhone dhaxyada xiran your computer habkan oo dhan.
Talaabada 4: Marka codsiga ayaa dhameystirtay la tirtiro dhammaan macluumaadka ay u soo bandhigaan doonaa shaashadda ah sida ku cad image hoose.
Taasi waa! Waa in ay fududahay in la tir macluumaadka oo dhan si joogto ah la isticmaalayo Wondershare SafeEraser, wax badan oo wax ku ool ah ka badan sida caadiga ah ka mid ah iyo 100% ammaan sameeyo.
> Resource > iPhone > Sida loo ka iPhone oo dhan ka saaraan Data